ဘယ်အချိန်မှာ porn စွဲစတင်ပါသလဲ? - အဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ ဘယ်အချိန်မှာ porn စွဲစတင်ပါသလဲ?
ဂယ်ရီ Wilson ကညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားသည့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးသည် -“ ဘယ်လောက်များများလဲ။ အပေါ် yourbrainonporn.com ဝဘ်ဆိုက်။ သူကဤမေးခွန်းသည် porn ၏ဆိုးကျိုးများကိုဒွိဟဖြစ်စေသည်ဟုယူဆသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၌ပြproblemနာမရှိပါ၊ သို့မဟုတ်သင်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများသည်ရောင်စဉ်တစ်ခုပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်များအဖြစ်ခွဲခြား သတ်မှတ်၍ မရပါ။ သူတို့ကပဲ / သို့မဟုတ်မရှိကြပေ။ မျဉ်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဖြတ်သွားသည်ကိုမေးမြန်းခြင်းသည် neuroplasticity ၏နိယာမကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ ဦး နှောက်သည်အမြဲတမ်းသင်ယူခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတုန့်ပြန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
လေ့လာရေး supernormal ဆွ၏ပင်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုလျှင်မြန်စွာဦးနှောက်နဲ့အပြောင်းအလဲအပြုအမူပြောင်းလဲပစ်နိုင်မဖော်ပြပါ။
ဥပမာအားဖြင့်, အဲဒါကိုသာ5ရက်ပေါင်းယူ တခုတ်တရာင်းသွေးဆောင် ကျန်းမာလူငယ်လူကြီးများအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုရန်။ ဂိမ်းကစားသူများသည်စွဲလမ်းခြင်းမရှိသော်လည်း ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းသည်သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂရုဏာနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အခြား၌ စမ်းသပ်မှုကြွက်များအားလုံးနီးပါးသည်“ စားသောက်ဆိုင်” အစားအစာကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာသုံးစွဲနိုင်သောအဝလွန်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သည်။ ကြွက်များ၏ dopamine receptor များကျဆင်းရန်အတွက်ရက်အနည်းငယ်သာအမှိုက်များစားရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်အစာစားခြင်းမှသူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချ။ စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းခြင်းကကြွက်များကို ပို၍ ပင်မူးယစ်စေနိုင်သည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြောင့်ဒီ ဂျာမန်လေ့လာမှု အဆိုပါဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ Max Planck အင်စတီကျုကနေညစ်ညမ်း၏အလယ်အလတ်အသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောသူတို့သညျကွညျ့ရှု။ ဒါဟာအလေးအနက်စွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကိုလောင်ပိုမိုညစ်ညမ်းခြင်း, လျော့နည်း functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုတှေးအချေါနဲ့ဦးနှောက်၏စိတ်ခံစားမှုအစိတ်အပိုင်းများအကြားရှိ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် porn မှလျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation, သူတို့ကိုလောင်ပိုမိုညစ်ညမ်းလည်းရှိ၏။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆွတဲ့အချို့သောအဆင့်အထိအသုံးပြုဖြစ်လာတဲ့အခါဒီ desensitisation တစ်ဦးဂန္နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ပိုပြီးထိတ်လန်သို့မဟုတ် weirder ပစ္စည်းလိုအပ်ပါတယ်။
An အီတလီလေ့လာမှု တစ်ပါတ်သညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကြုံတွေ့တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး porn ကိုလောင်ခဲ့သူအထက်တန်းကျောင်းကျကွီးရှယျအိုမြား၏ 16% တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသတင်းပို့သည် non-porn အသုံးပြုသူ 0% မှနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
ရိုးရှင်းစွာထားပါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်, သတိထား, desensitisation နှင့်အခြားစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ရောင်စဉ်အပေါ်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အဆက်မပြတ်သင်ယူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လျောညီထွေကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းတဲ့ supernormal လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပင်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆားကစ်ပစ်မှတ်ထားဦးနှောက်နှင့်အတ္တ ဟူ. သော်လည်းကောင်းအမြင်ပုံစံသွင်းသွင်း။
သငျသညျ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြားလင့်များသို့သုတေသနပြုလေ့လာစူးစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ။ ၎င်းသည်သင့်အားပြင်ပ site တစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီး window အသစ်တစ်ခုဖြင့်ဖွင့်သည်။